कसरी मारियाडीबी 10.7 स्थापना गर्ने डेबियन 11 बुल्से - लिनक्सक्यापबलमा
कसरी मारियाडीबी 10.7 डेबियन 11 बुल्सआईमा स्थापना गर्ने
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० by जोशुआ जेम्स
अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्नुहोस्
निर्भरताहरू स्थापना गर्नुहोस्
MariaDB 10.7 GPG कुञ्जी र भण्डार आयात गर्नुहोस्
विकल्प 1 - मिरर सर्भर प्रयोग गरेर MariaDB 10.7 आयात गर्नुहोस्
विकल्प २ - आधिकारिक ब्यास स्क्रिप्ट प्रयोग गरेर MariaDB2रेपो आयात गर्नुहोस्
Debian मा MariaDB 10.7 स्थापना गर्नुहोस्
MariaDB 10.7 सेवा स्थिति जाँच गर्नुहोस्
सुरक्षा स्क्रिप्टको साथ मारियाडीबी 10.7 सुरक्षित गर्नुहोस्
MariaDB 10.7 उदाहरणमा लगइन गर्नुहोस्
कसरी हटाउने (अनइन्स्टल) MariaDB 10.7
टिप्पणी र निष्कर्ष
मारियाडीबी यसको प्रवर्तकको छेउमा सबैभन्दा लोकप्रिय खुला स्रोत डाटाबेसहरू मध्ये एक हो MySQL। को मूल रचनाकारहरू MySQL विकसित मारियाडीबी भन्ने डरको जवाफमा MySQL 2010 मा ओरेकलले यसलाई प्राप्त गरेको कारणले अचानक सशुल्क सेवा बन्नेछ। यस्तै रणनीतिहरू गर्ने यसको इतिहासको साथ, मारियाडीबी पछिका विकासकर्ताहरूले यसलाई खुला स्रोत र के भयो जस्तो डरबाट मुक्त राख्ने वाचा गरेका छन्। MySQL.
मारियाडीबी जस्तै लोकप्रिय भएको छ MySQL विकासकर्ताहरूसँग, उन्नत क्लस्टरिङ जस्ता सुविधाहरू सहित Galera क्लस्टर 4, छिटो क्यास/सूचकांकहरू, भण्डारण इन्जिनहरू, र सुविधाहरू/विस्तारहरू जुन तपाईंले फेला पार्नुहुन्न MySQL.
निम्न ट्यूटोरियलमा, तपाईंले सिक्नुहुनेछ कसरी मारियाडीबी 10.7 डेबियन 11 बुल्सेमा स्थापना गर्ने.
सिफारिस गरिएको OS: डेबियन ११ बुल्सेए
प्रयोगकर्ता खाता: sudo वा रूट पहुँच भएको प्रयोगकर्ता खाता।
तपाईको अपडेट गर्नुहोस् Debian सबै अवस्थित प्याकेजहरू अद्यावधिक छन् भनेर सुनिश्चित गर्न अपरेटिङ सिस्टम:
ट्यूटोरियल प्रयोग गरिनेछ sudo आदेश र तपाईंसँग sudo स्थिति छ भनी मान्दै.
तपाईंको खातामा sudo स्थिति प्रमाणित गर्न:
उदाहरण आउटपुट sudo स्थिति देखाउँदै:
अवस्थित वा नयाँ sudo खाता सेट अप गर्न, हाम्रो ट्यूटोरियल मा जानुहोस् Debian मा Sudoers मा प्रयोगकर्ता थप्दै.
प्रयोग गर्न मूल खाता, लगइन गर्न रूट पासवर्डको साथ निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्।
पहिलो चरण स्थापनाको लागि आवश्यक निर्भरताहरू स्थापना गर्न हो।
यो गर्नको लागि, तपाइँको टर्मिनलमा निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्:
मारियाडीबी सफलतापूर्वक स्थापना गर्न, तपाईंले MariaDB वा धेरै उपलब्ध मिररहरूबाट MariaDB 10.7 भण्डार आयात गर्नुपर्नेछ। ट्यूटोरियलले छनौट गर्न दुई विकल्पहरू देखाउनेछ।
GPG कुञ्जी र भण्डार आयात गर्न पहिलो विकल्प ऐना प्रयोग गर्नु हो। तपाईले तलका उदाहरण आदेशहरू परिमार्जन गरेर मिरर स्थानहरूको कुनै पनि संख्या सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकमात्र हानि यो हो कि तिनीहरू कुनै पनि प्रमुख रिलीज अद्यावधिकहरूमा केही दिनदेखि एक हप्ता पछाडि हुन सक्छन्, उदाहरणका लागि, 10.6.4 देखि 10.6.5।
पहिले, निम्न आदेश प्रयोग गरेर GPG कुञ्जी आयात गर्नुहोस्:
सफल भएमा आउटपुटको उदाहरण:
अर्को, MariaDB 10.7 भण्डार आयात गर्नको लागि तपाइँको टर्मिनलमा आदेश चलाउनुहोस्:
नोट, डाउनलोड दर्पण पाउन सकिन्छ यस पृष्ठमा बाट मारियाडीबी फाउन्डेसन रिपोजिटरी को लागी तपाईको नजिकको स्थान फेला पार्न।
अब कि कुञ्जी र भण्डार आयात गरिएको छ नयाँ थप प्रतिबिम्बित गर्न apt प्याकेज प्रबन्धक सूची अपडेट गर्नुहोस्।
अर्को, विकल्प2छोड्नुहोस् र स्थापना भागमा जानुहोस्।
दोस्रो छनोट र हुनसक्छ अधिक रुचाइएको आधिकारिक ब्यास स्क्रिप्ट प्रयोग गर्नु हो किनकि कुनै पनि अद्यावधिकहरू आधिकारिक भण्डारहरूमा डिप्लोय भएपछि तुरुन्तै हुनेछन्। तिनीहरूको सर्भर नजिक नभएका प्रयोगकर्ताहरूले केही समस्याहरूको सामना गर्न सक्छन्, तर यो बहुमतको लागि समस्या हुनेछैन।
तपाईको टर्मिनलमा, निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्।
नोट गर्नुहोस्, यदि आदेश असफल भयो भने, सम्भवतः, तपाईंले कर्ल प्याकेज स्थापना गर्न बिर्सनुभयो।
नोट, म्याक्सस्केल र उपकरणहरू छोडिएका थिए। तपाईंले यी झण्डाहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, तर हालको समयमा, उपकरणहरू डेबियन 11 को लागि समर्थित छैनन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई यी अतिरिक्तहरू आवश्यक पर्दैन।
यसले भण्डार सफलतापूर्वक आयात गरिएको देखाउँछ। अर्को, आफ्नो APT भण्डार सूची ताजा गर्नुहोस्।
MariaDB स्थापना गर्न, तपाईंले क्लाइन्ट र सर्भर प्याकेजहरू स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ। यो निम्नानुसार गर्न सकिन्छ:
प्रकार वाई र त्यसपछि थिच्नुहोस् कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् स्थापनाको साथ अगाडि बढ्न।
संस्करण जाँच गरेर MariaDB को स्थापना पुष्टि गर्नुहोस् र निर्माण गर्नुहोस्:
अब तपाईंले MariaDB स्थापना गर्नुभएको छ, र तपाईंले निम्न systemctl आदेश प्रयोग गरेर डाटाबेस सफ्टवेयरको स्थिति प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ:
पूर्वनिर्धारित रूपमा, तपाईंले मारियाडीबी स्थिति सक्रिय हुन पाउनुहुनेछ। यदि होइन भने, MariaDB सुरु गर्नुहोस्, निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्:
प्रणाली स्टार्टअप मा MariaDB सक्षम गर्न:
प्रणाली स्टार्टअप मा MariaDB असक्षम गर्न:
MariaDB सेवा पुन: सुरु गर्न:
स्थापना गर्दा मारियाडीबी ताजा, पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू अधिकांश मापदण्डहरूद्वारा कमजोर मानिन्छन् र ह्याकरहरूलाई सम्भावित रूपमा घुसपैठ वा शोषण गर्न अनुमति दिने चिन्ताको कारण बन्छन्। समाधान भनेको स्थापना सुरक्षा स्क्रिप्ट चलाउनु हो जुन यसको साथ आउँछ मारियाडीबी स्थापना।
पहिले, सुरु गर्न निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस् (mysql_secure_installation):
अर्को, तल पछ्याउनुहोस्:
को लागि पासवर्ड सेट गर्दै मूल खाता।
स्थानीय होस्ट बाहिरबाट पहुँचयोग्य रूट खाताहरू हटाउँदै।
बेनामी-प्रयोगकर्ता खाताहरू हटाउँदै।
परीक्षण डाटाबेस हटाउँदै, जुन पूर्वनिर्धारित रूपमा अज्ञात प्रयोगकर्ताहरूद्वारा पहुँच गर्न सकिन्छ।
नोट, तपाईं प्रयोग गर्नुहोस् (र) सबै हटाउन।
अब तपाईले स्थापना पछि स्थापना सुरक्षा स्क्रिप्ट पूरा गर्नुभयो, तपाईको लग इन गर्नुहोस् मारियाडीबी डाटाबेस निम्न प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ:
तपाईँलाई मूल पासवर्ड प्रविष्ट गर्न प्रेरित गरिनेछ जुन तपाईँले स्थापना सेटअप वा पोस्ट-स्थापना सुरक्षा स्क्रिप्टमा सेट गर्नुभयो। एक पटक MySQL सेवा उदाहरण भित्र, तपाइँ यसलाई सञ्चालनमा हेर्नको लागि परीक्षणको रूपमा निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ।
निम्न टाइप गर्नुहोस् डाटाबेस आदेश देखाउनुहोस्:
MySQL मा नयाँहरूका लागि, सबै आदेश सिन्ट्याक्सको अन्त्य हुनुपर्छ ";"
टर्मिनलबाट बाहिर निस्कन, निम्न टाइप गर्नुहोस् निकास आदेश:
यदि तपाईं अब मारियाडीबी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न र यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन चाहनुहुन्छ भने, निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्नुहोस्:
प्रकार वाई र त्यसपछि थिच्नुहोस् कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् स्थापना रद्द गर्न अगाडि बढ्न।
अर्को, पूर्ण हटाउनका लागि थपिएका भण्डारहरू हटाउनुहोस्। यदि तपाइँ 10.6 वा अर्को स्रोतमा स्विच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ यो गर्न चाहानुहुन्छ।
पहिले, यदि तपाईंले मिरर विधि प्रयोग गरेर MariaDB 10.7 स्थापना गर्नुभयो भने, निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस् - हटाउने झण्डा अब थपियो।
bash स्क्रिप्ट भण्डार हटाउन, निम्न आदेश प्रयोग गर्नुहोस्।
ध्यान दिनुहोस् कि यो आदेशले तपाईंको प्रणाली सफा गर्न मद्दत गर्न मारियाडीबी स्थापनामा धेरै प्रयोग नगरिएका निर्भरताहरू हटाउनेछ।
ट्यूटोरियलमा, तपाईंले मारियाडीबी 10.7 को नवीनतम संस्करण Debian 11 Bullseye नवीनतम स्थिर रिलीजमा कसरी स्थापना गर्ने भनेर सिक्नुभयो।
समग्रमा, यदि तपाईंले पुरानो स्थिर 10.5 बाट अपग्रेड गर्नुभयो भने यसले मद्दत गर्दछ किनकि यो अहिले 10.6 को तुलनामा धेरै राम्रो छ यदि तपाईं अहिले 10.7 मा सर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यहाँ स्तरवृद्धि संग प्रदर्शन मा पर्याप्त लाभहरू छन्। यदि तपाइँ स्तरवृद्धि गर्नुहुन्छ भने, डाटाबेस मर्मत वा अपग्रेडहरूसँग गर्नको लागि अनगिन्ती घण्टाको पीडा र पूर्ण निराशाबाट बच्न त्यसो गर्नु अघि सधैं आफ्नो डाटाबेस जगेडा गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
विभाग Debian ट्याग डेबियन ११ बुल्सेए, मारियाडीबी मेल अन्वेषण
Ubuntu 10.7 मा MariaDB 20.04 कसरी स्थापना गर्ने
AlmaLinux 8 मा Xfce डेस्कटप कसरी स्थापना गर्ने